विकृत बन्दै हाम्रो दशैं - Enepalese.com
मुकुन्द कोइराला २०७७ कार्तिक ९ गते १६:२६ मा प्रकाशित
दशैं दूर- दराज र विकृतिमा सिमित हुदै गएको छ। दशैंको महत्त्व खाली निधारमा टिका लागाउने र खसीको मासु खानेमा सिमित हुदै गएको छ भन्दा कत्ति फरक नपर्ला।
भन्दै सुनिन्छ नि सिकार बिनाको दशैं के दशैं ? बिक्रीमा घर जमानतमा लुगा र गहना अनि टिक टकमा फोटा र भिडिओ उपलोड गर्न नपाए के दशैं ? भन्ने सम्म हाम्रो समाज पुगिसकेको छ। झनै कोरोना कहरले गर्दा आफ्ना लाइ (आफुले मन पराएका लाइ ) हरदम अंकमाल गरेर एउटै थालमा को ख्वाई को ख्वाई नानि हाम्म भन्दा पनि हुनेछ ! फित भनेर सामाजिक दुरी पनि कायम गर्नु नपर्ने खुट्टा बोकाएर रात भरि सुते पनि कोरोना नसर्ने कट्टु साटेर लाए पनि हुने अनि आफन्त (नाता पर्ने तर आफुलाई मन नपर्ने )चाहि कोरोना छ है — हामि त घर बाट बाहिर निस्केका छैनौ के गर्नु ? यसपाली यस्तै भयो! भन्दै झारा टार्ने नेपाली समाजको नाङ्गो असली चित्रलाइ यहि सामाजिक सञ्जालले उदाङ्गो बनाई दिएको छ।
रातो माटोले घर लिप्ने सेतो कमेरोले घर रङ्गाउने त कुरै छाडौ,यो कुनै दन्त्य कथा जस्तो मात्र सिमित भएको छ । हुदा हुदा आफ्ना मान्यजनको हात बात टिका र जमरा ग्रहण गरेर आशिर्बाद लिने परम्पारा माथी नै सामाजिक सञ्जालले धावा बोल्न थालिसकेका छन्। यसमा सनातन बैदिक रिती रिवाजको अनुसरण गर्ने हु भन्ने र यसको पृष्ठ पोषण गर्ने हु भन्ने हिमायतीहरुले बेलैमा सोच्न आतिनै जरुरी छ।
उन्नत समाज र जीवन हुनका लागि राम्रो कुराको अनुकरण र अनुसरन गर्ने नाराम्रा कुरालाई छाडेर हिड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सक्नु पर्छ।
आफु अंग्रेजीको ए पनि नबुझ्ने अनि मेरो छोराले नेपाली बुझ्दैन है ! भन्दै फेस विडियो कल गर्ने आमा बुवाहरुले आपनो बुढेस कालमा बाबु एक गिलास पानि देउन म उठ्न सकिन भन्दा गो एंड गेट इट योर सेल्फ, भन्दा उदायो सपना सबै हुरीले !!! भन्ने गीतको याद गर्दै बर्र आँसुले प्यास मेट्न नपरोस भन्दै दशैं दसा नबनोस सबैमा दुर्गा माता ले सद्बबुद्धि प्रदान गरुन।